“Daawo Sawirrada”Munaasabad lagu xusayay maalinta afka Hooyo ee 21ka Febraayo oo Muqdisho lagu qabtay | Radio Muqdisho
“Daawo Sawirrada”Munaasabad lagu xusayay maalinta afka Hooyo ee 21ka Febraayo oo Muqdisho lagu qabtay
Published on February 21, 2013 by admin · 3 Comments · 6,813 views
Munaasabadan lagu weyneynayay horumarinta afka Soomaaliga 21ka bisha Febraayo oo kuubeegan Maanta islamarkaana ah maalinta afka hooyo ayaa waxaa lagu qabtay hoolka shirarka ee wasaaradda Warfaafinta,Boostada,Isgaarsiinta,iyo Gaadiidka.
Xafladan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda Warfaafinta ayaa waxaa kaqeybgalay wasiirka Wasaaradda Warfaafinta,Boostada,Isgaarsiinta iyo Gaadiidka mudane C/llaahi Ciilmooge Xersi, wasiir Kuxigeenada wasaaradda mudane C/shakuur Cali Mire iyo mudane Ibraahim Isxaaq Yaroow iyadoo ay Sidoo kale goob joog ahaayeen qubaro qeybweyn kasoo qaatay horumarinta afka hooyo iyo qoristiisaba Sanadihii 71kii ilaa 74kii kuwaas oo ay kamid ahaayeen Xuseen Sheekh Axmed kadare.
Munaasabadan ayaa intii ay socotay waxaa suugaan isugu jirtay heeso iyo gabayo katurjumaya Taariikhda afkeena iyo heerarkii uu soomaray kasoo jeediyay hobolada Qaranka ee Waaberi.
Xuseen Sheekh Axmed Kadare oo kamid ahaa qorayaashii afkeena hooyo ee qiimaha badan ayaa goobta Ka sheegay in halgan dheer loosoo galay qorista afkeena loona baahanyahay in laga shaqeeyo sidii looga Ilaalinlahaa inuusan dabargo’in.
Cabdi Xaaji Goobdoon oo isna kamid ahaa suxufiyiintii xiligii kacaanka kahowlgalayay idaacada Qaranka ee Radio Muqdisho ayaa tilmaamay in kahor qorista afka Soomaaliga xitaa lagu dhibqabay sidii bulshada looga dhaadhicinlahaa amarada kasoo baxa madaxdii dowladii kacaanka maadaama uusan jirin af rasmi Ah oo qoran islamarkaana erayo aan lafahmikarin ay kubixi jireen Ogeysiisyada,wararka iyo Barnaamijyada kabaxa idaacada Qaranka.
Wasiir kuxigeenka wasaaradda Warfaafinta, Boostada, Isgaarsiinta iyo Gaadiidka mudane Ibraahim Isxaaq Yarow ayaa sheegay maanta ay tahay maalin weyn maadama caasimadii dalka lagu xusayo Munaasabadan qaaliga ah isagoo xusay in iyadoo laga ambaqaadayo dastuurka qaranka ee la ansixiyay Welina qabyada ah ay wasaaraddu soo kordhisay in Raadiyaha qaranka iyo TV-gaba laga siidaayo warar iyo barnaamijyo kubaxaya lahjada mayga oo kamid ah 2da lahajad ee uu afka Soomaaligu u kala baxo.
Sidoo kale wasiirka Warafafinta, Boostada, Isgaarsiinta iyo Gaadiidka C/llaahi Ciilmooge Xersi oo xaflada Sooxiray ayaa sheegay in R/wasaaraha Soomaaliya uu qeyb kaqaatay sidii munaasabadan loo Qabanlahaa isagoo wasiirku ka sheekeeyay muhiimada uu leeyahay afka Soomaaliga.
Mudane Ciilmooge ayaa intaa kudaray in wasaaraddu qorsheysay sidii looga faa’iideysanlahaa Fanaaniinta Soomaaliyeed ee qurbaha kasoo laabanaya dalkana imaanaya sidii hal abuurkooda iyo guud ahaan fanka loogu furilahaa Tiyaatarka Qaranka oo qeyb kamid ah la dayactiray si loo bilaabo soosaarid erayo cusub iyo fan dhaxal gal ah maadaama mudo 23 sanadood ah uu dalku burbursanaa.
Ugu danbeyntii wasiirka ayaa mid mid u gacanqaaday hal abuuradii kasoo qeybgalay xaflada iyo qubaradii afka Soomaaliga qoristiisa qeybta weyn kulahaa iyo fanaanada caanka ah ee Soomaaliyeed Seynab Xaaji Cali Baxsan.
maxamed husen says:	February 21, 2013 at 5:43 pm	Viva afka hooyo maanta oo kale waxay kuhaboneyd inaan joogo wadanki hooyo
Reply »	mohamed says:	February 21, 2013 at 11:18 pm	Hanoolaado afka hooyo , waligiisna hajiro , somaliyana hanoolaato .
Reply »	fartuun says:	March 3, 2013 at 5:30 pm	mxaa u sameen laheed afka hooyo hadii aad joogi laheed wadanka